COVID-19 (coronavirus) malagu gudbin karaa cuntada? – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA COVID-19 (coronavirus) malagu gudbin karaa cuntada?
COVID-19 (coronavirus) malagu gudbin karaa cuntada?
Ma jiraan wax caddeyn ah oo muujinaya in COVID-19 lagu gudbiyo cunnada.
Coronaviruses waxay ubaahantahay marti (xayawaan ama bini aadam) si ay ugu koraan oo ugama kori karaan cuntada. Cunto karinta ayaa la filayaa inuu dilo fayraska.
in cudurkan lagu kala qaado cuntada ama ay gudbiso cuntadu waxay ka yidhaahdeen
Waqtigaan la joogo ma jiraan wax caddeyn ah oo ku saabsan cuntada ama baakadaha cuntada ay la xiriiraan gudbinta COVID-19.
cunto kasto oo la kariyey kuma dul noolaan karo xanaankan
Si ka duwan fayrasyada caloosha ku dhaca caloosha iyo mindhicirka (GI) sida norofeyras iyo cagaarshowga A oo inta badan dadka ku bukooda cunto wasakheysan, SARS-CoV-2, oo sababa COVID-19, waa fayras sababa cudurada neef mareenka. Soo-gaadhista cunnada ee fayraskan ayaan loo garanayn inay tahay marin gudbiya.
Fayraska waxaa loo maleynayaa inuu ku faafayo qof ilaa qof. Tan waxaa ka mid ah inta u dhaxaysa dadka xiriirka dhow u dhexeeyo (qiyaastii 6 fiit), iyo dhinac neefsashada ee la soo saaro marka qof cudurka qaba uu qufaco ama hindhisto.
Dhibcaha hindhisada kasoo baxa waxay ku soo dhici karaan afka ama sanka dadka u dhow ama laga yaabo inay galaan sanbabada. Waa suurta gal in qofku uu qaado COVID-19 adoo taabanaya dusha sare ama shay uu ku jiro fayraska ka dibna taabto afkooda, sankooda, ama indhahooda, laakiin tani looma maleynayo inay tahay habka ugu weyn ee fayrasku u faafo.
Si kastaba ha noqotee, had iyo goor waa muhiim in la raaco 4-ta tillaabo ee badbaadada cuntada – nadaafada, gooni, cunto karsan, iyo qaboojin – si looga hortago jirrada cuntada ka dhasha.
waxaanad ka arkhrisan kartaa in aan cuntada lagu kala qaadan linkyadan hoose